SARY: Solika Nitera-doza tao Cebu, Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2013 15:14 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, русский, Aymara, English
Roa herinandro lasa izay, olona maherin'ny 90 no namoy ny ainy raha nilentika tao amorontsirak'i Filipina, faritr'i Cebu ny sambo mpitondra mpandeha iray rehefa nifandona taminà sambo mpitondra entana. Mbola tsaroana foana ankehitriny ny loza naterak'ilay fifandonana rehefa niraraka tao an-tanàna morontsirak'i Talisay, Cordova, sy Lapu-Lapu ny solika 120.000 litatra tao anatin'ilay sambo nilentika .
Ankoatra ireo alan-konko (mangrôvy) maherin'ny 300 hekitara tratran'ny solika, nampifindra toerana ireo mpanjono maherin'ny 3.000 ihany koa ny solika raraka ary mety hampikatso ny fandraharahana momba ny fizahan-tany ao amin'ny faritra.
Lizzy Oi nitsidika tanànan'ny fanjonoana ao Cordova ary nizara izay hitan'ny masony:
Namely nandritra ny fotoanan'ny fahavokaran'ny voankazon'ny alan-konko indrindra ny loza:
Nanatontosa asa fanadiovana avy hatrany ny mponina. Tishiana Mann nanamarika fomba mahomby sasany hanesorana solika ao anaty rano:
Natomboka ny fanomezana volo sy ny fanapaham-bolo maimai-poana mba hanampiana amin'ny asa fanadiovana. Nanangona volon'akoho ihany koa ireo olom-pirenena
Saingy nampitandrina ny mpahay siansa iray fa mety hampitombo ny loza indray ny fampiasana volo.
Christina Garcia Frasco nihevitra fa ilaina ny fametrahana lalàna henjana momba ny eny an-dranomasina: